Teny tsara indrindra avy amin'i Vladimir Putin - Victor Mochere
Fotoana famakiana: 19 mn novakiana
Vladimir Vladimirovich Putin dia politisiana rosiana ary manamboninahitra manamboninahitra teo aloha izay filohan'i Rosia, toerana izay nofeheziny nanomboka tamin'ny 2012, ary teo aloha nanomboka tamin'ny 1999 ka hatramin'ny 2008. Izy koa no praiminisitra nanomboka tamin'ny 1999 ka hatramin'ny 2000, ary tamin'ny 2008 hatramin'ny 2012 indray. Putin no filoha Eoropeana faharoa naharitra ela indrindra taorian'i Alexander Lukashenko. Niasa ho mpiasam-pitsikilovana vahiny KGB nandritra ny 16 taona, niakatra ho lietnà kolonely, talohan'ny nialany tamin'ny 1991 mba hanomboka asa ara-politika tao Saint-Pétersbourg.
Nifindra tany Moscou izy tamin'ny 1996 mba hanatevin-daharana ny fitantanan'ny filoha Boris Yeltsin. Talen'ny Sampan-draharahan'ny Fiarovana Federaly (FSB) sy sekreteran'ny Filankevitry ny Fiarovana izy, talohan'ny nanendrena azy ho praiminisitra tamin'ny Aogositra 1999. Taorian'ny fametraham-pialan'i Yeltsin, dia lasa filoha mpisolo toerana i Putin, ary tsy ampy efa-bolana taorian'izay dia voafidy mivantana. tamin'ny fe-potoam-piasana voalohany ho filoha ary voafidy indray tamin'ny 2004.
Satria noferana araka ny lalàmpanorenana tamin'ny fe-potoam-piasana roa nifanesy ho filoha izy, dia lasa praiminisitra indray i Putin nanomboka tamin'ny 2008 ka hatramin'ny 2012 teo ambany fitarihan'i Dmitry Medvedev, ary niverina ho filoham-pirenena tamin'ny 2012 tamin'ny fifidianana nosimban'ny fiampangana hosoka sy fihetsiketsehana; voafidy indray izy tamin'ny taona 2018. Tamin'ny Aprily 2021, taorian'ny fitsapan-kevi-bahoaka, nanao sonia ny fanitsiana lalàm-panorenana izy ka anisan'izany ny iray izay ahafahany milatsaka hofidiana indroa fanampiny, izay mety hanitatra ny fiadidiany hatramin'ny 2036.
Nandritra ny fotoana voalohany nitondran'i Putin ho filoha, dia nitombo nandritra ny valo taona nisesy ny toekaren'i Rosia, ka ny harinkarena faobe norefesina tamin'ny alalan'ny fahefa-mividy dia nitombo 72%; Nitombo be ny fahafaham-po amin'ny fiainan'ny Rosiana manombana tena. Ny fitomboana dia vokatry ny fiakarana avo dimy heny amin'ny vidin'ny solika sy ny entona, izay ahitana ny ankamaroan'ny fanondranana Rosiana, ny fanarenana ny fahaketrahana taorian'ny kaominista sy ny krizy ara-bola, ny fiakaran'ny fampiasam-bola avy any ivelany, ary ny politika ara-toekarena sy ara-bola malina.
Nitarika an'i Rosia ho amin'ny fandresena tamin'ny Ady Tsetsenina Faharoa koa i Putin. Tamin'ny naha praiminisitra teo ambany fitarihan'i Medvedev, dia nanara-maso ny fanavaozana ara-tafika lehibe sy ny fanavaozana ny polisy izy, ary koa ny fandresen'i Rosia tamin'ny Ady Rosiana-Georgian. Nandritra ny fe-potoam-piasana fahatelo naha filoha azy, ny fihenan'ny vidin-tsolika miaraka amin'ny sazy iraisam-pirenena nampiharina tamin'ny fiandohan'ny taona 2014 taorian'ny nanombohan'i Rosia ny fitsabahana ara-tafika tany Okraina sy ny fanakambanana an'i Crimea dia nitarika ny harin-karena faobe tamin'ny 3.7% tamin'ny taona 2015, na dia niverina indray aza ny toekarena Rosiana tamin'ny 2016 tamin'ny 0.3. % fitomboan'ny harinkarena faobe.
Nandritra ny fe-potoam-piasana fahefatra naha-filoha azy, dia namely an'i Rosia ny areti-mifindra COVID-19, ary nanome baiko ny fanafihana an'i Okraina tamin'ny taona 2022 i Putin, izay nitarika sazy fanampiny nihatra tamin'i Rosia sy azy manokana. Ny fivoarana hafa teo ambany fitarihan'i Putin dia nahitana ny fananganana fantsona solika sy entona, ny famerenana amin'ny laoniny ny rafitra fitetezana zanabolana GLONASS, ary ny fananganana fotodrafitrasa ho an'ny hetsika iraisam-pirenena toy ny Lalao Olaimpika ririnina 2014 tany Sochi sy ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA 2018.
Teo ambany fitarihan'i Putin, nivadika ho amin'ny fitondrana jadona i Rosia. Tsy mihevitra an'i Rosia ho demokrasia ny manam-pahaizana, amin'ny filazana ny fanagadrana sy ny famoretana ny mpanohitra ara-politika, ny fandrahonana sy ny fanafoanana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ary ny tsy fisian'ny fifidianana malalaka sy ara-drariny. Nahazo naoty ratsy i Rosia tamin'ny fanondroan'ny Transparency International's Corruption Perceptions Index, ny Index Democracy an'ny Economist Intelligence Unit, ary ny Freedom House's Freedom in the World Index.
Ny sasany amin'ireo teny tsara indrindra avy amin'i Vladimir Putin dia voatanisa etsy ambany.
"Ny ampahany betsaka amin'ny mponina eran-tany dia mbola tsy mahavidy trano, fanabeazana ary fikarakarana ara-pahasalamana tsara." - Vladimir Putin
“Tsy afaka ho mpanao politika any Rosia ny olona iray izay mandray vola avy any ivelany noho ny asany ara-politika, ary noho izany dia mahasoa ny vahiny.” - Vladimir Putin
“Ambonin'ny zava-drehetra, ny fanatanjahantena toy ny judo, raha ny fahitako azy, dia mampianatra ny olona hifandray tsara. Izy ireo dia mampianatra antsika hanaja mpiara-miasa, mampianatra antsika hahatakatra fa ny mpiara-miasa malemy ivelany dia tsy vitan'ny hoe mametraka fanoherana mendrika, fa, raha miala sasatra sy manao zavatra be loatra ianao, dia mety handresy. " - Vladimir Putin
“Tsy azo ekena ara-moraly ary tsy misy dikany ara-politika, manimba ary mampidi-doza ny ezaka rehetra hampitoniana ny Nazia teo anelanelan’ny 1934 sy 1939 tamin’ny alalan’ny fifanarahana sy fifanarahana isan-karazany.” - Vladimir Putin
"Manan-jo hanapa-kevitra ny olona rehetra, ary ankehitriny any Eoropa dia ekena kokoa ny fizotran'ny fanalefahana ny fiandrianam-pirenena ao anatin'ny rafitry ny Vondrona Eoropeana." - Vladimir Putin
“Na iza na iza tsy manenina ny fahalasanan'ny Firaisana Sovietika dia tsy manana fo. Na iza na iza maniry ny hamerenana azy io dia tsy manana ati-doha.” - Vladimir Putin
"Raha ny momba ireo oligarkika izay mahazo ekipa fanatanjahantena any ivelany, ary mampiasa vola any ivelany, dia tsy horaisiko ho ratsy izany trangan-javatra izany." - Vladimir Putin
“Tamin'ny fotoana iray, nahita ny polisy nanao famoretana ireo mpikatroka Occupy Wall Street izahay. Tsy hantsoiko hoe mety na tsy mety ny fihetsiky ny polisy.” - Vladimir Putin
"Tamin'ny farany, niverina teo amin'ny kianjan'izao tontolo izao i Rosia ho fanjakana matanjaka - firenena izay henoin'ny hafa ary afaka mijoro ho azy." - Vladimir Putin
“Farafaharatsiny, any Rosia, tsy afaka mandeha fotsiny ianao ary miditra amin'ny resaka an-telefaona tsy misy didy navoakan'ny fitsarana. Izany no fomba tokony handehanan'ny fiarahamonim-pirenena miady amin'ny fampihorohoroana. - Vladimir Putin
“Tamin’ny tapaky ny taonjato faha-18, tamin’ny 1745-1747, dia i Ossetia no voalohany lasa anisan’ny Fanjakana Rosiana. Tamin'izany fotoana izany dia fikambanana iray niray hina; Fanjakana iray i Ossetia Avaratra sy Atsimo.” - Vladimir Putin
"Eo amin'ireo firenena lehibe dia misy foana ny marimaritra iraisana sy ny fifanolanana." - Vladimir Putin
"Chechnya dia ampahany amin'ny Federasiona Rosiana." - Vladimir Putin
“Namorona fitaovana fampiasam-bola tena tsara i Shina, anisan'izany ny tambajotra iray manontolo misy vola be. Ny Tahiry fampiasam-bola tsy miankina Rosiana dia miara-miasa amin'ny sasany amin'ireo vola ireo, miaraka amin'ny vola fampiasam-bola lehibe indrindra ao Shina.” - Vladimir Putin
“Firenena lehibe manana kolontsaina lehibe i Shina, feno olona mahavariana, mazoto ary manan-talenta.” - Vladimir Putin
"Natomboka tamin'ny taona 1960 ny fananganana ny rafitra fantsona entona voalohany, tamin'ny faramparan'ny Ady Mangatsiaka, ary nandritra ireo taona rehetra ireo, nanomboka tamin'ny taona 1960 ka hatramin'izao, i Rosia dia nanatanteraka ny adidiny amin'ny fifanarahana amin'ny fomba tsy miovaova sy azo antoka. , na inona na inona toe-javatra ara-politika.” - Vladimir Putin
"Cromwell dia mpanao didy jadona feno rà toa an'i Stalin." - Vladimir Putin
"Ny demografika dia manamafy fa ny fisafidianana ny hanan-janaka faharoa dia efa safidy mety ho an'ny fahatelo." - Vladimir Putin
"Na eo aza ny zava-bitan'ny sivilizasiona, ny olombelona dia mbola iray amin'ireo zavaboary marefo indrindra eto an-tany." - Vladimir Putin
"Mifindra avy any amin'ny Ranomasimbe Atlantika mankany amin'ny Ranomasimbe Pasifika ny hetsika ara-toekarena… Manana tombony voajanahary i Rosia satria manamorona ny Oseana Pasifika ihany koa izy." - Vladimir Putin
“Tena maty tokoa ny Eoropeana!” - Vladimir Putin
"Na dia nandritra ny taona maro nisian'ny Ady Mangatsiaka, ny fifandonana mahery vaika teo amin'ny Firaisana Sovietika sy Etazonia, dia nisoroka ny fifandonana mivantana teo amin'ny sivily sy ny miaramilanay izahay." - Vladimir Putin
“Mety tsy hilamina mihitsy ny zava-drehetra. Saingy tsy maintsy manandrana izany isika. ” - Vladimir Putin
“Vitsy ny olona mahatakatra ny halehiben’ny loza nitranga tamin’ny faramparan’ireo taona 1980, rehefa tsy nahavita nanavao ny Firaisana Sovietika ny Antoko Komonista.” - Vladimir Putin
“Ho an'i Rosia, tsy misy ary mety tsy misy safidy politika hafa afa-tsy ny demokrasia. Na izany aza, ny demokrasia Rosiana dia… tsy ny fanatanterahana ny fenitra napetraka amintsika avy any ivelany.” - Vladimir Putin
“Izay tsy manenina noho ny faharavan’ny Firaisana Sovietika dia tsy manana fo; izay te hamelona azy amin’ny endriny teo aloha dia tsy manan-doha”. - Vladimir Putin
“Ny tantara dia manaporofo fa ny didy jadona rehetra, ny endrika fitondrana tsy refesi-mandidy rehetra dia mandalo. Ny rafitra demokratika ihany no tsy mandalo. Na inona na inona lesoka, ny olombelona dia tsy namorona zavatra ambony kokoa.” - Vladimir Putin
“Ahoana no azo itokisana ny mpiasam-panjakana na mpanao politika raha miteny mafy izy mba hahasoa an'i Rosia nefa miezaka maka ny volany, ny volany any ivelany?” - Vladimir Putin
“Ahoana no hifehezana ny lanja? Amin'ny tsy fihinanana tafahoatra. Ahoana no hijanonana amin'ny endriny? Manao fanatanjahantena ny iray. Tsy misy pilina mahagaga eto.” - Vladimir Putin
"Resy lahatra aho fa ny mahazatra any Rosia dia tokony ho fianakaviana manan-janaka telo." - Vladimir Putin
"Tsy tarihin'ny fanombanana mety ho an'ny asako velively aho." - Vladimir Putin
“Izaho no lehilahy manankarena indrindra, tsy any Eoropa ihany, fa manerana izao tontolo izao. Manangona fihetseham-po aho. Manan-karena aho satria indroa nanankinan'ny vahoakan'i Rosia ahy ny fitarihana firenena lehibe toa an'i Rosia - mino aho fa izany no harenako lehibe indrindra." - Vladimir Putin
"Mino aho fa tokony ho ferana ny fe-potoam-piasan'ny filoham-pirenena." - Vladimir Putin
"Mino aho fa efa takatr'i Etazonia sy ho takatr'izy ireo bebe kokoa fa Rosia matanjaka ihany no hamaly ny tena tombontsoan'i Etazonia." - Vladimir Putin
“Tsy mamaky boky nosoratan’olona namadika ny Tanindrazana aho.” - Vladimir Putin
"Mandeha any amin'ny gym aho, milomano isan'andro ary indraindray mihaona amin'ny namana ary manao zavatra ivelan'ny fandaharam-pianarana." - Vladimir Putin
“Manana fiainana manokana aho izay tsy avelako hitsabaka. Tsy maintsy hajaina izany. - Vladimir Putin
“Manana toe-tsaina tsara aho amin'ny olona rehetra izay miaro ny tontolo iainana, saingy tsy azo ekena izany rehefa ampiasain'ny olona ho fampisondrotana ny tenany izany, ka hampiasa azy io ho loharanon-karena. Tsy te hilaza ohatra manokana aho… fa matetika, ny tontolo iainana no ampiasaina amin'ny fanaovana an-keriny orinasa.” - Vladimir Putin
“Tiako sy namaky fatratra ny tantara nosoratan'i Jack London, Jules Verne ary Ernest Hemingway. Ireo olona aseho ao amin'ny bokiny, izay olona be herim-po sy manam-pahaizana manomboka amin'ny zava-niainana mampientam-po, dia tena namolavola ny tenako ary namelona ny fitiavako ny any ivelany. " - Vladimir Putin
“Tsy mbola nilaza mihitsy aho fa firenena matanjaka amin'ny angovo i Rosia, saingy manana tahiry betsaka kokoa noho ny olon-kafa rehetra isika. Nitondra tena foana izahay, ary mbola hitondra tena, amin’ny fomba tompon’andraikitra. Mikasa ny handray anjara amin'ny famelabelarana ny fitsipika iraisana eo amin'ny sehatry ny angovo izahay ary hanaja ny fitsipika izay novolavolaina miaraka. " - Vladimir Putin
“Tiako ny baolina kitra.” - Vladimir Putin
“Tiako be ny klasika Rosiana, ny literatiora klasika Rosiana. Namaky boky maoderina koa anefa aho. Tena tiako i Tolstoy sy Chekhov, ary tiako be koa ny mamaky ny Gogol.” - Vladimir Putin
“Ny tenako dia mahafantatra olona pelaka. Mifanaraka tsara izahay. Tsy miangatra aho na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana.” - Vladimir Putin
“Mamaky gazety aho, manandrana mijery fandaharana vaovao amin'ny fahitalavitra, fa, amin'ny ankapobeny, voarakitra. Tsy manam-potoana hanaovana izany aho mandritra ny andro, ka mijery zavatra voarakitra an-tsoratra aho. Raha ny momba ny gazety dia miezaka mamaky azy ireo isan'andro aho. Fanampin'izany, mazava ho azy, mijery ny buletins vaovao aho. ” - Vladimir Putin
"Hitako fa tsy ny rehetra any Andrefana no nahatakatra fa nanjavona tsy ho eo amin'ny sarintany ara-politikan'izao tontolo izao ny Firaisana Sovietika ary nisy firenena vaovao nipoitra niaraka tamin'ny foto-kevitra vaovao momba ny maha-olombelona sy ny ideolojika tamin'ny fototry ny fisiany." - Vladimir Putin
“Mandany fotoana kely isan’andro aho hanaovana fanatanjahantena.” - Vladimir Putin
"Milomano saika isan'andro aho, arivo metatra." - Vladimir Putin
“Heveriko fa ny olona tsirairay dia tokony hanana finoana ao anatiny, ao am-pony. Ny zava-dehibe dia tsy ny fanehoana ivelany an’io finoana io, fa ny toetra anaty ao anatin’ny fanahy.” - Vladimir Putin
"Heveriko fa fitiavana ny fahasambarana." - Vladimir Putin
“Heveriko fa tsara izany rehefa maka hevitra amin'ny filoha ny ben'ny tanànan'ny tanàna lehibe indrindra any Rosia.” - Vladimir Putin
"Heveriko fa tokony haneho ny safidiny ny vahoaka amerikana, ary hanaiky ny safidiny izahay." - Vladimir Putin
“Heveriko fa tokony hiray hina ny fianakaviambe iraisam-pirenena hiady amin'ny trangan-javatra tsy maha-olombelona toy ny fampihorohoroana sy ny famonoana olona tsy manan-tsiny tanteraka.” - Vladimir Putin
"Heveriko fa tsy tokony hifehy ny Internet isika." - Vladimir Putin
“Nobeazina tao amin'ny fianakaviana tena tsotra aho, raha ny marina, fianakavian'ny mpiasa. Samy olom-pirenena tsotra ny raiko sy ny reniko.” - Vladimir Putin
“Tiako ny hisarika ny sainao ho amin'ny zava-misy fa any Rosia, tsy toy ny any amin'ny ampahatelon'ny firenena maneran-tany, ny maha-pelaka dia tsy heloka bevava." - Vladimir Putin
“Aleoko miala amin'ny voambolana taloha. 'Superpower' dia zavatra nampiasainay nandritra ny ady mangatsiaka. Nahoana no ampiasaina izao?” - Vladimir Putin
“Tena feno fankasitrahana mandrakizay ny anjara sy ny olom-pirenen'i Rosia aho fa natoky ahy ho filohan'ny governemanta Rosiana.” - Vladimir Putin
“Azoko antoka fa kely dia kely ny kolikoly ao Chechnya.” - Vladimir Putin
“Raha mijery ny sarintanin'izao tontolo izao ny olona iray, dia sarotra ny mahita an'i Iraka, ary mety hihevitra ny olona fa mora kokoa ny mampanaiky firenena kely toy izany.” - Vladimir Putin
"Raha tsy mahavita miaro tena sy mamokatra ny firenena, raha very ny maha-zava-dehibe azy sy ny idealy, dia tsy mila fahavalo vahiny izy - hirodana ho azy." - Vladimir Putin
“Raha misy olona manao zavatra ivelan’ny lalàna dia tsy maintsy mampiasa fomba ara-dalàna ny fanjakana amin’ny fametrahana lalàna ho tombontsoan’ny maro an’isa. Izany no fomba fanao any Etazonia, ary izany koa no atao any Rosia. ” - Vladimir Putin
“Raha miteny amim-pahatoniana isika, amin'ny fomba ara-barotra, avelao aho hisarika ny sainao ho amin'ny zava-misy fa i Rosia dia mamatsy fitaovam-piadiana ho an'ny governemanta ara-dalàna ao Syria amin'ny fanarahana tanteraka ny fitsipiky ny lalàna iraisam-pirenena. Tsy mandika lalàna sy fitsipika izahay. ” - Vladimir Putin
“Raha te ho mpitondra ny taninao ianao, dia tsy maintsy miteny ny fiteninao, noho ny amin’Andriamanitra”. - Vladimir Putin
“Raha tianao ny toe-tsaiko manokana, dia lazaiko aminao fa tsy miraharaha ny fironan'ny olona iray aho." - Vladimir Putin
“Tamin'ny 1995, saika nanome an'i Chechnya ny maha-firenena sy ny fahaleovantena an'i Chechnya na dia tsy nekeny ho fanjakana mahaleo tena aza i Chechnya. Ary tiako ny hanamafisana mafy fa i Rosia dia nanaisotra ny miaramilany rehetra, namindra ny mpampanoa lalàna izahay, namindra ny polisy rehetra, nandrava ny fitsarana rehetra, tanteraka, 100 isan-jato. - Vladimir Putin
"Mifanaraka amin'ny Lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana, ny olana momba ny politika ivelany sy ny fiarovana dia eo am-pelatanan'ny filoha tanteraka." - Vladimir Putin
“Saika any amin'ny firenena rehetra, angamba any Rosia indrindra indrindra, dia lamaody ny manakiana ny olona eo amin'ny fitondrana. Raha mivoaka hanohana olona toa ahy ianao, dia ho voampanga ho nanandrana nanararaotra ny tenanao.” - Vladimir Putin
“Mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena, ny Filankevitry ny Fiarovana ny Firenena Mikambana ihany no afaka manasazy ny fampiasan-kery amin'ny fanjakana manjaka. Na inona na inona antony na fomba hafa azo ampiasaina hanamarinana ny fampiasana hery amin'ny fanjakana mahaleo tena dia tsy azo ekena ary azo raisina ho toy ny herisetra ihany." - Vladimir Putin
“Any amin’ny tany maro amin’izao andro izao, dia dinihina indray ny fitsipika momba ny fitondran-tena sy ny etika; voafafa ny fombam-pirenena, ny fahasamihafana eo amin’ny firenena sy ny kolontsaina”. - Vladimir Putin
"Any amin'ny fanjakana sasany any Etazonia, ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy dia mijanona ho heloka bevava." - Vladimir Putin
“Tamin’ny taonjato faha-20, dia nataon’ny Firaisana Sovietika ho tanteraka ny andraikitry ny fanjakana. Nandritra ny fotoana ela dia nahatonga ny toekarena sovietika tsy hifaninana tanteraka izany. Nandany vola be ho antsika io lesona io. Azoko antoka fa tsy misy olona te hahita izany miverimberina. ” - Vladimir Putin
"Ao amin'ny tontolo maoderina, ireo izay malemy dia hahazo torohevitra tsy misy dikany avy amin'ireo vahiny vahiny ny lalana tokony haleha sy ny politika tokony harahina." - Vladimir Putin
“Eny tokoa, mpiara-dia i Rosia sy Etazonia nandritra ny fifandonana roa nahatsiravina tamin'ny Ady Lehibe Faharoa sy Voalohany, izay mamela antsika hieritreritra fa misy zavatra mampiray antsika amin'ny fotoan-tsarotra, ary heveriko – mino aho – misy ifandraisany amin'izany. tombontsoa ara-jeopolitika ary manana singa ara-moraly ihany koa. - Vladimir Putin
“Irak dia firenena kely nefa tena mirehareha.” - Vladimir Putin
"Tena mampidi-doza ny mamporisika ny olona hahita ny tenany ho miavaka, na inona na inona antony manosika azy." - Vladimir Putin
"Ilaina ny manafoana ny hetsika mahery fihetsika rehetra, amin'ny lafiny rehetra, na inona na inona fiaviany." - Vladimir Putin
“Tsy mety ny manao olona ho fahavalo; tsy mety ny mampitahotra ny mponin’ny tanindrazany amin’io fahavalo io ary miezaka mamory mpiara-dia amin’izany fototra izany.” - Vladimir Putin
“Tranga iray ara-tantara ny hoe ao anatin'ny 250 taona, ny firenena iray dia afaka mifindra avy amin'ny zanatany ho any amin'ny firenena manankarena indrindra eran-tany sy mpitarika an'izao tontolo izao. Tena zava-bita tokoa izany, fanomezam-boninahitra ny talentan'ny firenena amerikana, ny vahoaka amerikana ary ny rafitra ara-politika sy ara-toekarena tsara indrindra. " - Vladimir Putin
"Mampanahy fa lasa mahazatra an'i Etazonia ny fitsabahan'ny miaramila amin'ny ady anatiny any amin'ny firenena vahiny." - Vladimir Putin
“I Rosia no tian'ny sasany hesorina. Mbola matahotra ny fanakantsakanana nokleary eto amintsika izy ireo. Manana ny politikantsika ivelany isika na tian'izy ireo na tsia. - Vladimir Putin
“Ny asa fanaovan-gazety, amin'ny resaka fanangonana vaovao, dia tsy mitovy amin'ny asa fitsikilovana. Raha ny hevitro dia tena mahaliana ny asan'ny mpanao gazety. " - Vladimir Putin
“Mizara ho foko sy foko i Libya.” - Vladimir Putin
"Niady tany Vietnam i McCain - heveriko fa manana rà sivily ampy eo amin'ny tanany izy." - Vladimir Putin
“An-tapitrisa eran'izao tontolo izao no mahita an'i Amerika tsy ho maodelin'ny demaokrasia fa miantehitra fotsiny amin'ny hery feno habibiana, mampifangaro fiaraha-mitantana amin'ny teny filamatra hoe: 'Na miaraka aminay ianao na manohitra anay'." - Vladimir Putin
“Tena ratsy ny teny anglisy.” - Vladimir Putin
“Ny hevitro momba ny KGB dia avy amin'ny tantaram-pitsikilovana tantaram-pitiavana. Vokatra madio sy nahomby tanteraka tamin'ny fanabeazana ny fitiavan-tanindrazana sovietika aho. " - Vladimir Putin
"Nilaza tamiko ny ray aman-dreniko fa nesorina tamin'ny fianakaviany ny ankizy tamin'ny 1941, ary ny reniko dia nanana zanaka nalaina taminy - mba hamonjena azy." - Vladimir Putin
"Ny toerana misy ahy manokana dia ny fiaraha-monina dia tsy maintsy miaro ny ankizy." - Vladimir Putin
"Ny fifandraisany miasa sy manokana amin'ny filoha Obama dia voamariky ny fitomboan'ny fahatokisana. Ankasitrahako izany.” - Vladimir Putin
“Naorina ny OTAN mba hanohitra ny Firaisana Sovietika tamin'ny androny sy ny fotoany. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy fandrahonana avy amin'ny Firaisana Sovietika, satria tsy misy intsony ny Firaisana Sovietika. Ary izay nisy ny Firaisana Sovietika taloha, dia misy firenena maromaro ankehitriny, anisan’izany i Rosia vaovao sy demokratika.” - Vladimir Putin
“Tsy misy misalasala fa entona misy poizina no nampiasaina tany Syria. Saingy misy ny antony rehetra hinoana fa tsy nampiasain'ny Tafika Syriana izany, fa tamin'ny herin'ny mpanohitra mba hanentanana ny fitsabahan'ireo vahiny mahery vaika, izay miandany amin'ny fondamentalista.” - Vladimir Putin
"Tsy misy olona tokony havela hanitsakitsaka ny lalàna amin-kerisetra." - Vladimir Putin
"Tsy misy olona maniry ny Firenena Mikambana hijaly amin'ny fiafaran'ny Ligin'ny Firenena Mikambana, izay nirodana satria tsy ampy hery. Azo atao izany raha mandalo ny Firenena Mikambana ny firenena manan-kery ary manao hetsika ara-miaramila tsy misy fanomezan-dàlana avy amin'ny filankevitry ny filaminana. " - Vladimir Putin
"Tsy misy firesahana momba ny ilana ady amin'ny fampihorohoroana mety ho tohan-kevitra amin'ny famerana ny zon'olombelona." - Vladimir Putin
“Tsy misy na iza na iza hanakana an'i Rosia eo amin'ny lalana hanamafisana ny demokrasia sy hiantohana ny zon'olombelona sy ny fahalalahana.” - Vladimir Putin
"Tsy misy olona tokony hanana illusion momba ny mety hahazoana fahefana ara-tafika manoloana an'i Rosia. Tsy avelanay hitranga mihitsy izany. - Vladimir Putin
"Tsy misy olona tokony hametraka ny fanantenany amin'ny fahagagana." - Vladimir Putin
"Ny olona iray dia afaka mankafy ny fiainany raha tsy miaina izany, ary tsy maintsy misy ifandraisany amin'ny risika iray." - Vladimir Putin
“Tsy maintsy tsy tso-po ny olona iray ary mampanantena zavatra tsy azonao tanterahina. Noho izany, tsy maintsy ho adala ianao ka tsy mahazo izay ampanantenainao, na minia mandainga. - Vladimir Putin
"Mazava tsara ny tanjonay: fari-piainana ambony ao amin'ny firenena izy ireo ary fiainana azo antoka, malalaka ary mahazo aina." - Vladimir Putin
“Ny miaramilanay no miantoka ny fiarovana sy ny fahaleovantenan'i Rosia.” - Vladimir Putin
"Ny fiarahamonintsika, anisan'izany ny liberaly, dia tsy maintsy mahatakatra fa tsy maintsy misy ny filaminana." - Vladimir Putin
“Tokony ho mangarahara araka izay azo atao ny hetsika ara-politika ao Rosia. Ny famatsiam-bola ara-politika avy any ivelany no tokony hojeren’ny fanjakana. - Vladimir Putin
“Tsy tokony hanelingelina ny fanatanjahantena ny politika. Ary ny fanatanjahantena dia tokony hisy fiantraikany amin'ny politika. " - Vladimir Putin
"Tsy nofidian'ny vahoaka amerikana ny filoha Obama mba hahafinaritra an'i Rosia." - Vladimir Putin
"Zavatra roa samy hafa kely ny hetsika hetsi-panoherana sy fampielezan-kevitra." - Vladimir Putin
"Ny radika dia azo jerena amin'ny tontolo rehetra." - Vladimir Putin
"Rosia sy Shina dia mpiara-miombon'antoka voajanahary. Mpifanolo-bodirindrina amin'ny sisintany iraisana lehibe izahay. ” - Vladimir Putin
“Tsy manana safidy ara-politika ary tsy afaka manana safidy politika afa-tsy ny demokrasia i Rosia. Te-hilaza aho, ary na dia manantitrantitra aza, fa mizara ireo fitsipika demaokratika manerantany manerana an'izao tontolo izao isika. " - Vladimir Putin
"Tsy manana angon-drakitra azo itokisana i Rosia izay manohana ny fisian'ny fitaovam-piadiana nokleary na fitaovam-piadiana famotehana faobe ao Iraka ary tsy mbola nahazo fampahalalana toy izany avy amin'ireo mpiara-miasa aminay izahay." - Vladimir Putin
“Tsy mila fifandonana na inona na inona i Rosia. Ary tsy handray anjara amin’ny karazana ‘fiombonana masina’ rehetra izahay”. - Vladimir Putin
“Ampahany amin'ny kolontsaina Eoropeana i Rosia. Noho izany, sarotra ny mieritreritra ny OTAN ho fahavalo. " - Vladimir Putin
"Rusia dia manohitra ny fihanaky ny fitaovam-piadiana faobe, anisan'izany ny fitaovam-piadiana nokleary, ary amin'ity toe-javatra ity dia miantso ny namanay Iraniana izahay mba handao ny fandaharan'asan'ny uranium." - Vladimir Putin
“Mila fanjakana matanjaka i Rosia ary tsy maintsy manana izany. Saingy tsy miantso ny totalitarianisme aho. ” - Vladimir Putin
"Tsy ho ela i Rosia, raha toa ka lasa, kopia faharoa an'i Etazonia na Angletera - izay manana fototra manan-tantara lalina ny sanda liberaly." - Vladimir Putin
"Ny demokrasia Rosiana dia ny herin'ny vahoaka Rosiana miaraka amin'ny fomban-drazany manokana momba ny fitondran-tena nasionaly, fa tsy ny fanatanterahana ny fenitra apetraka amintsika avy any ivelany." - Vladimir Putin
“Mihevitra ny manam-pahaizana sasany fa misy mamitaka ny WikiLeaks, izay manimba ny lazany mba hampiasana azy amin'ny tanjona ara-politika.” - Vladimir Putin
"Indraindray dia ilaina ny manirery mba hanaporofoana fa marina ianao." - Vladimir Putin
“Nandeha foana ny fitsikilovana hatry ny ela.” - Vladimir Putin
"I Stalin no olo-malaza indrindra manerana an'i Rosia." - Vladimir Putin
“Mifamatotra amin'ny fivavahana amin'ny maha-olona sy ny fanitsakitsahana ny lalàna ny Stalinisma, miaraka amin'ny famoretana sy ny toby. Tsy misy tahaka izany any Rosia ary antenaiko fa tsy hisy intsony izany.” - Vladimir Putin
"Tsy manana zom-pirenena na fivavahana ny fampihorohoroana." - Vladimir Putin
“Nasehon'ny fampihorohoroana indray fa efa niomana ny tsy hitsahatra amin'ny famoronana olona iharan'ny herisetra. Tsy maintsy misy farany izany. Tsy mbola nisy toy ny teo aloha, zava-dehibe ny fampiraisana ny herin’ny vondrom-piarahamonina maneran-tany hanohitra ny fampihorohoroana.” - Vladimir Putin
“Mandrahona olona foana ny mpampihorohoro. Raha hatahotra azy ireo isika dia midika izany fa nandresy izy ireo. - Vladimir Putin
"Ny fahaizana mandefitra dia tsy fahalalam-pomba ara-diplaomatika amin'ny mpiara-miombon'antoka fa kosa mandinika sy manaja ny tombontsoan'ny olon-tianao." - Vladimir Putin
"Ny tantara sy ny kolontsain'i India nandritra ny taonjato maro, ny tsangambato ara-javakanto ary ny tranombakoka ao Delhi, Agra ary Mumbai dia manana hery manintona miavaka." - Vladimir Putin
“Ny olan'i Chechnya dia olana efa hatry ny ela. Ny zava-misy dia amin'izao fotoana izao, ny fondamentalista sy ny mpampihorohoro dia manararaotra ireo olana efa hatramin'ny taonjato maro mba hanatanterahana ny tanjony manokana izay tsy misy ifandraisany amin'ny tombontsoan'i Chechnya. - Vladimir Putin
“Ny Fanambarana momba ny fiaraha-miasa stratejika eo amin'i India sy Rosia nosoniavina tamin'ny Oktobra 2000 dia lasa dingana manan-tantara tokoa. Ny fivoarana tamin’ny folo taona voalohany tamin’ny taonjato faha-21 dia nanamafy fa dingana iray tena lehibe sy ara-potoana izany.” - Vladimir Putin
"Ny safidy demokratika nataon'ny Rosiana tamin'ny fiandohan'ny taona 90 dia farany." - Vladimir Putin
"Ny sendikà Eurasian dia tetikasa natao hitahiry ny maha-firenena sy ny fiarahamonina Eurasian manan-tantara amin'ny taonjato vaovao, ao amin'ny tontolo vaovao." - Vladimir Putin
"Ny tanjaky ny toekarena mitombo ao India sy Rosia dia mifameno amin'ny lafiny maro." - Vladimir Putin
“Nifanaiky nandritra ny fihaonana an-tampon'ny G2008 Novambra 20 ireo mpitarika ny toekarena lehibe indrindra eran-tany mba tsy hamorona sakana hanakanana ny varotra eran-tany sy ny fidiran'ny renivohitra. Mizara ireo fitsipika ireo i Rosia. ” - Vladimir Putin
"Arakaraka ny isa ny mpanelanelana, ny olana bebe kokoa." - Vladimir Putin
“Tsy tsotra ny lalana mankany amin'ny fiarahamonina malalaka. Misy pejy mampalahelo sy be voninahitra eo amin’ny tantarantsika.” - Vladimir Putin
"Ny filozofian'ny FIFA dia ny fanitarana ny habaka baolina kitra eran-tany, hanaparitahana ny tontolon'ny baolina kitra." - Vladimir Putin
"Ny tanjon'ny conservatism dia tsy hoe manakana ny hetsika mandroso sy miakatra, fa manakana ny hetsika mihemotra sy midina, ao anaty haizina mikorontana ary miverina amin'ny fanjakana taloha." - Vladimir Putin
"Nomelohin'ny parlemanta Rosiana ny fifanarahana Molotov-Ribbentrop." - Vladimir Putin
"Ny vahoaka Rosiana sy ny kolontsaina Rosiana dia ny linchpin, ny lakaoly izay mampifandray ity sivilizasiona miavaka ity." - Vladimir Putin
"Ny vahoaka Rosiana dia manana ny fehezan-dalàna ara-kolontsainany manokana, ny fomban-drazany manokana." - Vladimir Putin
“Ny vahoaka Rosiana dia nanao ny safidiny ho amin'ny demokrasia tany am-piandohan'ireo taona 90. Tsy ho voafitaka izy ireo. Tsy misy olona tokony hanana fisalasalana. ” - Vladimir Putin
“Tsy tokony hojerena ho toy ny andrim-panjakana miady amin’ny fiaraha-monina sy ny fanjakana ny sampan-draharaham-piarovam-panjakana; mila mahatakatra izay mahatonga azy ireo hiasa hanohitra ny olony.” - Vladimir Putin
"Ny fanamafisana ny maha-firenena antsika dia, indraindray, adika ho autoritarianism." - Vladimir Putin
“Tsy ny fandrarahana tantely ao anaty kapoaka ihany no andraikitry ny governemanta, fa indraindray ny fanomezana fanafody mangidy”. - Vladimir Putin
“Fitsapana hatrany ny rafitry ny lalàmpanorenana ny famindram-pahefana, fitsapana ny heriny”. - Vladimir Putin
“Ny mpanorina ny Firenena Mikambana dia nahatakatra fa ny fanapahan-kevitra mahakasika ny ady sy ny fandriampahalemana dia tsy tokony hitranga raha tsy amin'ny marimaritra iraisana, ary miaraka amin'ny faneken'i Amerika, ny veto nataon'ireo mpikambana maharitra ao amin'ny Filan-kevi-piarovana dia voarakitra ao amin'ny Satan'ny Firenena Mikambana. Ny fahendrena lalina ananan’izany dia nanohana ny fahamarinan’ny fifandraisana iraisam-pirenena nandritra ny am-polony taona maro.” - Vladimir Putin
"Mifanakalo vaovao tsy tapaka ny sampan-draharahan'ny fiarovana amerikana sy Rosiana." - Vladimir Putin
"Nihoatra ny sisin-taniny i Etazonia tamin'ny sehatra rehetra - ara-toekarena, politika ary maha-olona - ary nametraka ny tenany tamin'ny fanjakana hafa." - Vladimir Putin
"Ny fisondrotry ny tsy fahampian'ny tetibola sy ny fanangonan'ny trosam-panjakana dia manimba toy ny fanangonam-bola." - Vladimir Putin
“Eken'izao tontolo izao ny zava-bita ara-kolontsainan'i Rosia. Tsy azo atao ny maka sary an-tsaina ny kolontsaina eran-tany raha tsy misy ny kolontsaina Rosiana, raha tsy misy ny mozika sy ny haisoratra.” - Vladimir Putin
"Ny zavatra ratsy indrindra ho an'ny mpanao politika dia ny manandrana sy mifikitra amin'ny fahefana amin'ny fomba rehetra azo atao, ary mifantoka amin'izany ihany." - Vladimir Putin
"Misy firenena lehibe sy firenena kely, manankarena na mahantra, ireo manana fomban-drazana demokratika lava ary ireo mbola mahita ny lalana mankany amin'ny demokrasia." - Vladimir Putin
"Misy zavatra roa ao amin'ny lalàna iraisam-pirenena: ny fitsipiky ny tsy fivadihan'ny faritany sy ny zo hanapa-kevitra." - Vladimir Putin
“Tsy maintsy mipetraka ao am-ponja ny mpangalatra.” - Vladimir Putin
“Tokony hadio ny tenany izay miady amin’ny kolikoly”. - Vladimir Putin
“Ny fandoavana bebe kokoa no fomba mora. Raha ny marina, maro ny vahaolana amin'ny olana. " - Vladimir Putin
“Tsy te handray ny andraikitry ny polisy iraisam-pirenena ny fiaraha-monina amerikana.” - Vladimir Putin
“Samy hafa isika rehetra, fa rehefa mangataka ny fitahian’ny Tompo isika, dia tsy tokony hohadinointsika fa noforonin’Andriamanitra mitovy isika.” - Vladimir Putin
"Tsy mila governemanta malemy isika fa governemanta matanjaka izay handray andraikitra amin'ny zon'ny tsirairay sy hikarakara ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny." - Vladimir Putin
"Tsy maintsy mijanona amin'ny fampiasana ny fitenin'ny hery isika ary miverina amin'ny lalan'ny fifanarahana diplomatika sy ara-politika." - Vladimir Putin
“Ilaina ny fandraharahana mba hahatakarana ny andraikiny ara-tsosialy, fa tsy ny fitadiavana fidiram-bola fanampiny sy ny hanan-karena ary ny fampitana ny vola any ivelany no tena asa sy tanjona ho an’ny orinasa, fa ny fijerena sy fanombanana ny vitan’ny mpandraharaha iray ho an’ny firenena, ny olona izay nahatonga azy ho mpanankarena tokoa. - Vladimir Putin
“Mila mampiasa ny Filankevitry ny Fiarovana ny Firenena Mikambana isika ary mino fa ny fitandroana ny lalàna sy ny filaminana ao anatin'izao tontolo sarotra sy mikorontana ankehitriny izao no iray amin'ireo fomba vitsivitsy hitazomana ny fifandraisana iraisam-pirenena tsy hirodana amin'ny korontana. Mbola lalàna ihany ny lalàna, ka tsy maintsy arahintsika na tiantsika na tsy tiantsika.” - Vladimir Putin
“Hiady aminy isika, hataontsika an-tranomaizina ary handringana azy.” - Vladimir Putin
"Tsy tokony handany solika hydrocarbon fotsiny isika fa hampiasa izany amin'ny fampivoarana angovo nokleary, angovo azo avy amin'ny rano ary angovo azo havaozina." - Vladimir Putin
“Tsy ao anatin'ny Ady Mangatsiaka intsony isika. Tsy azo ekena ny fihainoana ny namana.” - Vladimir Putin
“Inona no atao hoe Rechtsstaat? Fankatoavana ny lalàna misy izany”. - Vladimir Putin
“Inona no atao hoe tontolo unipolar? Na manao ahoana na manao ahoana ny fahatsarantsika an’io teny io, dia midika hoe ivon-kery tokana, ivon-kery tokana ary tompo tokana. - Vladimir Putin
"Rehefa efa nanana fitaovam-piadiana niokleary ny Etazonia, ary ny Firaisana Sovietika ihany no nanangana azy ireo, dia nahazo fampahalalana be dia be izahay tamin'ny alàlan'ny fantsona fitsikilovana vahiny." - Vladimir Putin
“Taiza eto amin'izao tontolo izao no nahitanao mpanao fanorenana manao ny zava-drehetra ara-potoana, manana kalitao tsara ary amin'ny vidiny faran'izay kely? Omeo firenena iray tahaka izany aho. Tsy misy firenena toy izany eto amin'izao tontolo izao, fantatrao. Tsy misy firenena toy izany na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. ” - Vladimir Putin
“Izay tsy malahelo ny Firaisana Sovietika dia tsy manana fo. Na iza na iza maniry izany hiverina dia tsy manana atidoha. - Vladimir Putin
“Nahoana izao tontolo izao no tsy tia an'i Rosia? Tsy mihevitra aho fa tsy tiana na heverina ho tsy mahalala. - Vladimir Putin
“Eny, ny fiainana any Chechnya hatreto dia toa fiainana aorian'ny loza voajanahary.” - Vladimir Putin
"Afaka milomano amin'ny fomba tianao ianao any amin'ny Ranomasina Maty, raha ny marina." - Vladimir Putin
"Tsy maintsy mankatò ny lalàna foana ianao, fa tsy rehefa misambotra anao amin'ny toerana manokana anao ihany izy ireo." - Vladimir Putin
“Mila fehezinao ny drone; mila mametraka fitsipika momba ny fifandraisana ianao mba hisorohana na hampihenana ny loza ateraky ny fiantohana. Tena zava-dehibe izany.” - Vladimir Putin
Top 10 fomba mora ahazoana vola 2022
Inona no tadiavina rehefa misafidy lalao slot an-tserasera